Na-eme Ihe E Kwuru n’Ekpere Onyenwe Anyị—Nke Mbụ
Ụlọ Nche—Nke A Na-amụ Amụ | Jun 2015
GỤỌ NKE Acholi Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Toba) Bengali Bicol Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Krio Latvian Lhukonzo Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Mauritian Creole Maya Mexican Sign Language Mizo Mongolian Moore Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Peruvian Sign Language Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Russian Sign Language Samoan Sango Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tshiluba Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Yoruba Zande Zapotec (Isthmus)
“Ka e doo aha gị nsọ.”—MAT. 6:9.
Gịnị ka okwu ahụ bụ́ “Nna anyị” na-akụziri anyị?
Gịnị mere anyị ji kwesị ịna-ekpe ekpere ka e doo aha Chineke nsọ?
Olee otú àgwà anyị ga-esi gosi na anyị na-arịọ ka e mee uche Chineke n’ụwa?
1. Olee otú anyị nwere ike isi jiri ekpere ahụ Jizọs kụziri na Matiu 6:9-13 zie ndị mmadụ ozi ọma?
ỌTỤTỤ ndị bu Ekpere Onyenwe Anyị n’isi. N’ozi ụlọ n’ụlọ, anyị na-agwakarị ndị mmadụ banyere ekpere a iji nyere ha aka ịghọta na Alaeze Chineke bụ ọchịchị dị adị nke ga-eme ka ụwa bụrụ paradaịs. Anyị na-agwakwa ha banyere ihe mbụ Jizọs kwuru n’ekpere ahụ iji gosi ha na Chineke nwere aha e kwesịrị ido nsọ.—Mat. 6:9.
2. Olee otú anyị si mara na Jizọs achọghị ka anyị na-ekwughachi ihe ndị o kwuru n’Ekpere Onyenwe Anyị otú ahụ o si kwuo ha?
2 Jizọs ọ̀ chọrọ ka anyị na-ekwughachi ihe ndị o kwuru n’ekpere ahụ otú ahụ ọtụtụ ndị chọọchị na-eme? Mba. Tupu Jizọs akụzie ekpere a, ọ sịrị: “Mgbe ị na-ekpe ekpere, ekwughachila otu ihe ugboro ugboro.” (Mat. 6:7) N’oge ọzọ ọ kụziiri ndị na-eso ụzọ ya otú ha ga-esi na-ekpe ekpere, o kwughachiri ihe ndị o kwuru n’ekpere ahụ, ma otú o si kwuo ha dị iche. (Luk 11:1-4) N’ihi ya, Jizọs ji ekpere ahụ kụziere anyị ụdị ihe anyị kwesịrị ịna-arịọ Chineke nakwa nke anyị kwesịrị ibu ụzọ rịọ.
3. Olee ajụjụ ndị anyị kwesịrị ichebara echiche ka anyị na-atụle ekpere ahụ Jizọs kụziri?
3 N’isiokwu a nakwa na nke na-eso ya, anyị ga-atụle ihe Jizọs kwuru n’ekpere ahụ ọ kụziri. Ka anyị na-eme otú ahụ, jụọ onwe gị, sị: ‘Olee otú m ga-esi jiri ihe e kwuru n’ekpere a mee ka ekpere m ka mma?’ Ajụjụ kadị mkpa ị ga-ajụ onwe gị bụ, ‘M̀ na-eme ihe Jizọs kwuru n’ekpere ahụ ọ kụziri?’
“NNA ANYỊ NKE BI N’ELUIGWE”
4. Gịnị ka okwu ahụ bụ́ “Nna anyị” na-echetara anyị? Oleekwa otú Jehova si bụrụ Nna anyị?
4 Ihe mbụ Jizọs kwuru n’ekpere ahụ bụ “Nna anyị.” Ihe a o kwuru na-echetara anyị na anyị na ụmụnna anyị n’ụwa niile nwere otu Nna, ya bụ, Jehova. Anyị hụkwara ibe anyị n’anya. (1 Pita 2:17) Ọ bụ ihe ùgwù na-enweghị atụ. Ndị Kraịst e tere mmanụ nwere olileanya ịga eluigwe. Chineke mụrụ ha ọzọ, ha abụrụ ụmụ ya. Ọ bụ ya bụ ụzọ pụrụ iche Jehova si bụrụ Nna ha. (Rom 8:15-17) Ndị nwere olileanya ịdị ndụ ebighị ebi n’ụwa nwekwara ike ịkpọ Jehova “Nna.” Ọ bụ ya nyere ha ndụ, jirikwa obiọma na-egboro ndị niile na-efe ya mkpa ha. Mgbe a ga-akpọ ndị nwere olileanya ibi n’ụwa “ụmụ Chineke” bụ mgbe ha ga-ezu okè ma kwesị ntụkwasị obi n’ule ikpeazụ.—Rom 8:21; Mkpu. 20:7, 8.
5, 6. Olee ihe ọma kachanụ ndị nne na nna ga-emere ụmụ ha? Gịnịkwa ka nwatakịrị nke ọ bụla kwesịrị iji aka ya mee? (Lee ihe e sere ná mmalite isiokwu a.)
5 Otu n’ime ihe ọma ndị nne na nna ga-emere ụmụ ha bụ ịna-akụziri ha otú e si ekpe ekpere, na-enyekwara ha aka ịghọta na Jehova bụ Nna anyị nke eluigwe nakwa na ọ hụrụ anyị n’anya. Otu onye nlekọta sekit na Saụt Afrịka kwuru, sị: “Malite n’ụbọchị a mụrụ ụmụ anyị, mụ na ha na-ekpekọ ekpere n’abalị ọ bụla, ọ gwụkwala ma mụ anọghị ya. Ha na-ekwukarị na ha anaghị echeta kpọmkwem ihe ndị m kwuru n’ekpere ndị ahụ anyị na-ekpe n’abalị. Ma, ha na-echeta otú ebe niile si ada jii, otú ikpegara Nna anyị bụ́ Jehova ekpere si bụrụ ihe dị nsọ, nakwa otú onye ọ bụla si anọ nwayọọ, obi eruokwa anyị ala. Ozugbo ha mụtara ikpe ekpere, m gwara ha ka ha na-ekpepụta ekpere ha ekpepụta ka m nụ ihe ha na-ekwu mgbe ha na-agwa Jehova ihe ha chere na otú obi dị ha. O nyeere m aka ịmata ihe dị ha n’obi. M jizi nwayọọ nwayọọ kụziere ha otú ha ga-esi na-etinye ihe ụfọdụ Jizọs kwuru n’ekpere ahụ ọ kụziri n’ekpere nke ha iji mee ka ekpere ha ka mma.”
6 Ụmụ nwaanyị abụọ ahụ ha mụtara ji nwayọọ nwayọọ na-eme nke ọma, ha na Jehova adịkwa ná mma. Ha alụọla di ugbu a. Ha na di ha ji obi ụtọ na-eje ozi oge niile. Ihe ọma kachanụ ndị nne na nna ga-emere ụmụ ha bụ inyere ha aka ka ha na Jehova dịrị ná mma. N’eziokwu, ọ bụ nwatakịrị nke ọ bụla ga-eji aka ya mee ka ya na Jehova na-adị ná mma. Otú ọ ga-esi mee ya bụ iji aha Chineke kpọrọ ihe ma na-akwanyere ya ezigbo ùgwù.—Ọma 5:11, 12; 91:14.
“KA E DOO AHA GỊ NSỌ”
7. Olee ihe ùgwù anyị nwere? Gịnị ka anyị kwesịrị ịna-eme?
7 Ọ bụ ihe ùgwù na anyị ma aha Chineke, bụrụkwa ndị o ‘wepụtaara aha ya.’ (Ọrụ 15:14; Aịza. 43:10) Anyị na-arịọ Nna anyị nke eluigwe, sị: “Ka e doo aha gị nsọ.” Ọ pụtara na anyị ga na-arịọ Jehova ka o nyere anyị aka ka anyị ghara ikwu ma ọ bụ mee ihe ga-eme ka a kọchaa aha nsọ ya. Anyị achọghị ime ka ụfọdụ ndị n’oge ndịozi, ya bụ, ndị bụ́ soro okwu ọnụ m, esola omume m. Pọl onyeozi degaara ha akwụkwọ ozi, sị: “A na-ekwulu aha Chineke n’etiti ndị mba ọzọ n’ihi unu.”—Rom 2:21-24.
8, 9. Nye ihe atụ gosiri na Jehova na-agọzi ndị na-agbalịsi ike ka e doo aha ya nsọ.
8 Anyị chọrọ ka e doo aha Chineke nsọ. Na Nọọwee, e nwere otu nwanna nwaanyị di ya nwụrụ na mberede, ya afọzie ya na nwa ya nwoke dị afọ abụọ. O kwuru, sị: “Oge ahụ siiri m ezigbo ike. M na-ekpe ekpere kwa ụbọchị n’ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ n’otu awa ọ bụla ka m nwee ike idi ihe merenụ ka Setan ghara ịhụ ihe ọ ga-eji kwaa Jehova emo n’ihi mkpebi na-ezighị ezi m mere ma ọ bụ na mụ ekwesịghị ntụkwasị obi. M chọrọ ka e doo aha Jehova nsọ, chọọkwa ka nwa m hụ papa ya ọzọ na Paradaịs.”—Ilu 27:11.
9 Jehova ọ̀ zara ekpere nwanna nwaanyị ahụ? Ee. Ya na ụmụnna na-anọ mgbe mgbe, ha ana-agba ya ume. Mgbe afọ ise gara, ọ lụrụ otu nwanna bụ́ okenye. Nwa ya nwoke dị afọ iri abụọ ugbu a, bụrụkwa nwanna e mere baptizim. Nwanna nwaanyị ahụ sịrị: “Obi dị m ezigbo ụtọ na di m nyeere m aka ịzụ nwa m.”
10. Olee otú Jehova ga-esi mee ka e doo aha ya nsọ kpamkpam?
10 Olee otú Jehova ga-esi doo aha ya nsọ kpamkpam, wepụkwa nkọcha niile a na-akọcha ya? Otú ọ ga-esi mee ya bụ na ọ ga-ebibi ndị niile jụrụ ọchịchị ya. (Gụọ Ezikiel 38:22, 23.) A ga-eji nwayọọ nwayọọ mee ka ụmụ mmadụ zuo okè. Anyị na-atụsi anya ike mgbe ụmụ mmadụ niile ga na-eme ka e doo aha Jehova nsọ. Ọ bụ mgbe ahụ ka Nna anyị nke eluigwe ga-abụ “ihe niile n’ebe onye ọ bụla nọ.”—1 Kọr. 15:28.
11, 12. N’afọ 1876, gịnị ka Jehova nyeere ezi Ndị Kraịst aka ịghọta?
11 Tupu Jizọs alaghachi eluigwe, ndịozi ya jụrụ ya, sị: “Onyenwe anyị, ị̀ na-eweghachiri Izrel alaeze ahụ n’oge a?” Ihe Jizọs zara ha gosiri na oge erubeghị ka ha mata mgbe Alaeze Chineke ga-amalite ịchị. Ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha lekwasị anya n’ozi ọma ha kwesịrị ịna-ekwusa. (Gụọ Ọrụ Ndịozi 1:6-8.) Ma, Jizọs gwara ha ka ha na-atụ anya mgbe Alaeze Chineke ga-abịa. Ọ bụ ya mere Ndị Kraịst ji ekpe ekpere kemgbe oge ndịozi Jizọs ka ọ bịa.
12 Mgbe oge ruwere ka Jizọs malite ịchị n’eluigwe, Jehova nyeere ndị na-efe ya aka ịghọta afọ ọ ga-abụ. N’afọ 1876, Nwanna Charles Taze Russell dere otu isiokwu e bipụtara n’otu magazin a kpọrọ Bible Examiner. Isiokwu ahụ bụ “Oge Ndị Jentaịl: Olee Mgbe Ọ Ga-agwụ?” O kwuru na afọ 1914 ga-abụ afọ dị mkpa, kwuokwa na “oge asaa” ahụ Daniel buru n’amụma na “oge a kara aka nke ndị mba ọzọ” Jizọs kwuru okwu ya bụ otu ihe. *—Dan. 4:16; Luk 21:24.
13. Gịnị mere n’afọ 1914, gịnịkwa ka ihe ndị na-eme n’ụwa kemgbe ahụ na-egosi?
13 N’afọ 1914, mba ndị dị na Yurop malitere ịlụ agha, ya ejiri nwayọọ nwayọọ zuo ụwa niile. Mgbe agha ahụ biri n’afọ 1918, ụnwụ nri echiela ndị mmadụ ọnụ n’ala. E nwekwara ajọ ọrịa na-efe efe nke gburu ọtụtụ ndị karịa ndị nwụrụ n’agha ahụ. Otú a ka “ihe ịrịba ama” ahụ Jizọs kwuru a ga-eji mata na ọ chịwala n’eluigwe si malite imezu. (Mat. 24:3-8; Luk 21:10, 11) Ihe ndị na-emenụ gosiri na ọ bụ n’afọ 1914 ka ‘e nyere Onyenwe anyị Jizọs okpueze.’ “O wee gaa na-emeri, ka o wee nwezuo mmeri ya.” (Mkpu. 6:2) Agha dara n’eluigwe, ya achụpụ Setan na ndị mmụọ ọjọọ ya, chụdata ha n’ụwa. Kemgbe ahụ, ụmụ mmadụ ahụla na ihe ahụ Mkpughe kwuru bụ eziokwu, ya bụ, “Ahụhụ ga-adịrị ụwa na oké osimiri, n’ihi na Ekwensu agbadatawo n’ebe unu nọ, ọ na-ewe oké iwe, ebe ọ maara na o nwere oge dị mkpirikpi.”—Mkpu. 12:7-12.
14. (a) Gịnị mere ọ ka ji dị mkpa ka anyị na-ekpe ekpere ka Alaeze Chineke bịa? (b) Olee ọrụ dị mkpa anyị kwesịrị ịna-arụ?
14 Amụma ahụ e dere ná Mkpughe 12:7-12 nyeere anyị aka ịghọta ihe mere oké ihe ọjọọ ji malite ime n’ụwa mgbe Jizọs ghọrọ Eze. Ọ bụ eziokwu na Jizọs na-achị n’eluigwe, ọ bụ Setan ka na-achị ụwa a. Ma, otú Jizọs ga-esi nwezuo mmeri ya n’oge na-adịghị anya bụ iwepụ ihe ọjọọ niile n’ụwa. Anyị ga na-ekpe ekpere ka Alaeze Chineke bịa ruo mgbe Jizọs ga-eme ya. Otú anyị ga-esikwa gosi na anyị na-eme ihe Jizọs kwuru n’ekpere ahụ bụ ịna-ekwusa ozi ọma, nke so ‘n’ihe ịrịba ama’ ahụ Jizọs nyere anyị. O kwuru, sị: “A ga-ekwusakwa ozi ọma nke a nke alaeze n’elu ụwa dum mmadụ bi ka ọ bụrụ àmà nye mba niile; mgbe ahụkwa ka ọgwụgwụ ga-abịa.”—Mat. 24:14.
“KA UCHE GỊ MEEKWA N’ỤWA”
15, 16. Olee otú àgwà anyị ga-esi gosi na anyị na-arịọ Chineke ka uche ya mee n’ụwa?
15 Ihe dị ka puku afọ isii gara aga, ọ bụ naanị uche Chineke ka a na-eme n’ụwa. Ọ bụ ya mere Jehova ji lechaa ebe mara mma o nyere ụmụ mmadụ ná mmalite ma sị na ọ “dị nnọọ mma.” (Jen. 1:31) Setan mechara nupụrụ ya isi. Kemgbe ahụ, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-eme uche Chineke n’ụwa. Ma, taa, obi dị anyị ụtọ na anyị ji anya anyị na-ahụ ka ihe dị ka nde mmadụ asatọ na-ejere Jehova ozi. Ọ bụghị naanị na ha na-ekpe ekpere ka uche Chineke mee n’ụwa, kama ha na-agbalịsi ike ime ihe Jizọs kụziri n’Ekpere Onyenwe Anyị. Otú ha si eme ya bụ ịkpa àgwà ọma na iji ịnụ ọkụ n’obi na-akụziri ndị ọzọ banyere Alaeze Chineke.
Ị̀ na-enyere ụmụ gị aka ime ihe gosiri na ha na-arịọ ka uche Chineke mee n’ụwa? (A ga-akọwa ya na paragraf nke 16)
16 Dị ka ihe atụ, e nwere otu nwanna nwaanyị bụ́bu onye ozi ala ọzọ n’Afrịka. E mere ya baptizim n’afọ 1948. Ọ sịrị: “M na-ekpe ekpere mgbe niile ka Jehova mee ka e nwee ike izi ndị niile yiri atụrụ ozi ọma ma nyere ha aka ịmata Jehova tupu oge agaa. M chọọ izi mmadụ ozi ọma, m na-arịọ Jehova ka o nyere m aka ikwu ihe ga-eru ya n’obi. M na-ekpekwa ekpere ka Jehova gọzie mbọ anyị na-agba inyere ndị yiri atụrụ anyị na-amụrụ Baịbụl aka.” Ka a sịkwa ihe mere nwanna nwaanyị a dị afọ iri asatọ ji na-eme nke ọma n’ozi ọma. O nyerela ọtụtụ ndị aka ịghọ Ndịàmà Jehova. O doro anya na i nwere ike icheta ụmụnna ndị ọzọ ji obi ha niile na-eme uche Chineke n’agbanyeghị na ha emeela agadi.—Gụọ Ndị Filipaị 2:17.
17. Olee otú obi dị gị n’ihi ihe Jehova ga-eme n’ọdịnihu iji zaa ekpere anyị na-ekpe ka uche ya mee n’ụwa?
17 Anyị ga na-ekpe ekpere ka e mee uche Chineke n’ụwa ruo mgbe a ga-ebibi ndị iro Chineke niile. A ga-emekwu uche Chineke n’ụwa mgbe a ga-akpọlite ọtụtụ ijeri ndị nwụrụ anwụ ka ha biri n’ụwa mgbe ọ ga-aghọ paradaịs. Jizọs sịrị: “Ka ihe a ghara iju unu anya, n’ihi na oge awa na-abịa mgbe ndị niile nọ n’ili ncheta ga-anụ olu ya wee pụta.” (Jọn 5:28, 29) Obi ga-adị anyị ezigbo ụtọ mgbe anyị ga-ahụ ndị ikwu na ibe anyị a kpọlitere n’ọnwụ. Chineke “ga-ehichapụkwa anya mmiri niile n’anya [anyị].” (Mkpu. 21:4) Ọtụtụ n’ime ndị a ga-akpọlite n’ọnwụ ga-abụ “ndị ajọ omume,” ndị dịrị ndụ ma nwụọ n’amụghị eziokwu banyere Jehova Chineke na Ọkpara ya. Ọ ga-abụ ezigbo ihe ùgwù ịkụziri ha uche Chineke na nzube ya, si otú ahụ nyere ha aka iru eru inweta “ndụ ebighị ebi.”—Ọrụ 24:15; Jọn 17:3.
18. Olee ihe kacha bụrụ mkpa ụmụ mmadụ?
18 Mgbe Alaeze Chineke ga-abịa, ọ ga-eme ka aha Jehova dị nsọ, ndị niile nọ n’eluigwe na n’ụwa ana-efekwa Chineke. Chineke ga-egboro ụmụ mmadụ ihe kacha bụrụ mkpa ha mgbe ọ ga-emezu ihe atọ mbụ Jizọs kwuru n’ekpere ahụ ọ kụziri. Ma, e nwere ihe ndị ọzọ dị anyị mkpa e kwuru n’ihe anọ fọrọ n’ekpere ahụ. Anyị ga-atụle ha n’isiokwu na-esonụ.
^ para. 12 Ị chọọ ịhụ ebe a kọwara otú amụma a si mezuo n’afọ 1914, gụọ akwụkwọ bụ́ Gịnị n’Ezie Ka Bible Na-akụzi? peeji nke 215-218.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Na-eme Ihe E Kwuru n’Ekpere Onyenwe Anyị—Nke Mbụ
Ụdị Dị Iche Iche Họrọ ụdị nke ị ga-ewere ỤLỌ NCHE—NKE A NA-AMỤ AMỤ Jun 2015
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ ỤLỌ NCHE—NKE A NA-AMỤ AMỤ Jun 2015
ỤLỌ NCHE—NKE A NA-AMỤ AMỤ Jun 2015